Apple Music vs. iCloud Music Library vs. iTunes egwuregwu
Part 1: Gịnị bụ Apple Music, iCloud Music Library, iTunes egwuregwu?
Part 2: Olee Apple Music, iCloud Music Library, iTunes egwuregwu na-arụ ọrụ ọnụ?
Nkebi nke 3: Download gụgharia music free na TunesGo
Apple Music ka anyị nile maara bụ music gụgharia ọrụ awa site ibu Apple Inc. na ọrụ nwere ike ịhọrọ music maka nkwanye na ha na ngwaọrụ. Apple Music ndenye aha na-agụnye gbagwojuru 1, internet redio na Apple tinyere Jikọọ, na blog ikpo okwu maka artists mere na ha nwere ike ịkekọrịta media na ha Fans. Music na-atụ aro na-nyere site Apple dabeere na-amasị ndị ọrụ na Apple Music na-ike na Siri olu iwu.
iCloud Music Library bụ okwu chepụtara site Apple nile music na ị echekwara na iCloud.
iTune egwuregwu na aka nke ọzọ bụ otu n'ime Apple na ígwé ojii dabeere ọrụ maka music na i nwere ike bulite 25,000 songs si gị iTune music n'ọbá akwụkwọ na a na ndenye aha ego nke $24.99 kwa afọ na-ígwé ojii na mgbe ahụ enuba na budata ha ruo 10 ngwaọrụ nke bụ ịdenyere aha na ya.
Apple Music bụ ewu ewu maka eziokwu na o nwere ọtụtụ oké songs na ya katalọgụ na iCloud Music Library bụ dị ka ya albatross n'ime ụlọ. iCloud Music Library kemgbe ntabi kụrụ ebe ya igba egbe n'etiti ya ọrụ ukwuu n'ime n'ihi na ọ enye gị ohere tinye ọkacha mmasị gị songs na listi ọkpụkpọ ewepụtara na ndenye aha katalọgụ gị ọbá akwụkwọ; ndị a tracks nwekwara ike na-egwuri offline.
iCloud Music Library na-arụ ọrụ maka ma pụtara ma i tụrụ ụtụ maka iTunes egwuregwu ma ọ bụ Apple Music, gị niile music echekwara na iCloud mụ na iCloud Music Library.
Olee otú Apple Music, iCloud Music Library na iTunes egwuregwu na-arụ ọrụ ọnụ?
Apple na ya website ka a kọwara iTunes egwuregwu na Apple Music dị ka onwe ha music ngwa ma ekele ọ bụla ọzọ. Otú ọ dị, e nwere atọ atụmatụ na anya-ejikọ abụọ ndị a viz. iCloud Music Library.
iCloud Music Library irè incorporates iTunes egwuregwu, si otú na-eme ka onye ọrụ playlist na iTunes n'ọbá akwụkwọ dị ọbụna maka ime download ma ọ bụ gụgharia. The tracks nwere ike dọwara si a CD, zụta si iTunes ahịa ma ọ bụ dị site na ụfọdụ ndị ọzọ na ngwaọrụ ahụ; niile ga-dakọtara na iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Ọ bụrụ na iTunes egwuregwu bụ enweghị ike ịhụ a song on Apple sava, ọ uploads a onye ọrụ oyiri nanị na songs na-ebudatara ke otu ụzọ. Adịkwa songs na aka nke ọzọ na-ebudatara dị ka ACC faịlụ na-enweghị DRM.
Otu na-esetịpụ ezi maka ọrụ ndị na-tụrụ ụtụ maka Apple Music ma ị chọrọ ịga a nzọụkwụ ọzọ. Na ikpe nke Apple Music debanyere aha, ha nwere ike ime ka ojiji nke iCloud Music Library site na-agbakwụnye na egwu jidesie ha iTunes Ọbá akwụkwọ na zọpụta ha n'ihi offline ntị. Nke a na atụmatụ bụ inweta ọbụna na-enweghị Apple Music gafee iche iche na ngwaọrụ ma ọ bụ nanị na ikpe nke na iTunes ịzụrụ.
Ọzọ dị mkpa dị iche bụ na ọ bụla track na e adịkwa site Apple Music ọkọkpọhi DRM mgbe track ebudatara site ọrụ on a dị iche iche ngwaọrụ ma ọ bụ mgbe mbụ track Nwela ehichapụ si onye ọrụ iTunes Library. A na-eme ka a N'ihi nke Apple si nkà na ụzụ na-ezube hụ na otu ọrụ kagbuo ha na ndenye aha, ha na-adịghị ike na-na usoro egwu niile ha zọpụta na-ege ntị na-anọghị n'ịntanetị ma enweghị na mbụ.
Adịkwa faịlụ ndị ga-enwe mgbe nile DRM free maka onye tụrụ ụtụ ma iTunes egwuregwu na Apple Music.
Mgbe tụnyere, Apple Music bụ oké ọnụ karịa iTunes egwuregwu na ọ na-efu $14.99 kwa ọnwa maka isii ndị ezinụlọ atụmatụ na $9.99 kwa ọnwa n'ihi na onye na-ege ntị. iTunes egwuregwu na aka nke ọzọ na-efu $24.99 kwa afọ dị ka ekwuola ezie na ị na-adịghị enwe ohere Apple Music si katalọgụ na on-dem.
Ma iTunes egwuregwu na Apple Music akwado onye ọba akwụkwọ maka upto 25,000 songs ọ bụla na iTunes ịzụrụ na-agunyeghi na nke a. The ịgba yiri ka na-eto eto na-1,000,000 mgbe iOS 9 a tọhapụrụ a n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Mgbe iCloud Music na-tụgharịrị site na gị Mac, ọ nyochara gị niile music ka ego ma ọ bụrụ na e nwere kenha song na iTunes Music Store ma ọ bụ Apple Music katalọgụ dị ka ikpe nwere ike ịbụ. Ọ bụrụ na ọ nwere track, mgbe ahụ, ọ na-adịghị bulite tracks aka ka iCloud Music Library ma ọkụ gị songs na ndị ugbu a na Apple Music ma ọ bụ iTunes Music Store katalọgụ. Mgbe ị na-enuba ma ọ bụ re-ibudata na song na ngwaọrụ na-adịghị nwere ya echekwara nọ n'ógbè unu, ị ibudata version awa site Apple Music ma ọ bụ iTunes Music Store.
Ọ bụrụ na a track si gị ọbá akwụkwọ na-ahụghị ha katalọgụ, mgbe ahụ track na-aka uploaded iCloud Music Library dị ka ọ bụ. Dị ka abụ na-re-ebudatara dị iche ngwaọrụ, ị ga-esi na mbụ version na ACC usoro.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na iCloud bụghị a ndabere ọrụ na ga-enye gị mbipụta nke gị tracks na ígwé ojii. Apple Music ike ga-eji na-enweghị iCloud Music Library dị ka mma.
Free Soundcloud Downloader na akwụ ụgwọ Downloader Ịlụ Soundcloud Music
Download High School Musical Na Torrent ma ọ bụ enweghị Torrent
YouTube Downloader Online Mp3 Free na Alternative
The Top ise Sites ka Download RAP Songs Online
Esi Free Music si Sites App na ngwaọrụ ndị ọzọ
> Resource> Music> Apple Music vs. iCloud Music Library vs. iTunes egwuregwu